Rastrabani.com | हृदयेश त्रिपाठी आगामी चुनावमा सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने ! - Rastrabani.com हृदयेश त्रिपाठी आगामी चुनावमा सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने ! - Rastrabani.com
काठमाडौँ, ७ असोज । लामो समय तराई मधेस केन्द्रित दलमा रहेका नेता हृदयेश त्रिपाठी एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने भएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका त्रिपाठीको नेतृत्वमा रहेको ‘स्वतन्त्र राजनीतिक समूह’का नेताहरु सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने टुंगो भएको हो । त्रिपाठीसहित बीके गुप्ता, पशुपतिदयाल मिश्र र जगदीश शुक्ला सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने भएका हुन् । हृदयेश नवलपरासी, बीके र ईश्वरदयाल कपिलवस्तु, पशुपतिदयाल र जगदीश बाँकेबाट चुनाव लड्ने निश्चित भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
दुवै पक्षबीच भएको दुई बुँदे सहमतिमा स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरु आगामी प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने र स्वतन्त्र पहिचानसहित क्रियाशील हुने उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।